Maitiro ekuisa shambadziro muMil Ads | e-commerce nhau
Maitiro ekuisa shambadziro muChiuru Ads
zviuru ads Ndiyo imwe yemapeji anozivikanwa kwazvo muSpain yekuve iyo nzvimbo yaunogona kutengesa nekutenga zvinhu zvakawanda. Kazhinji ivo ndivo vanhu vanovaisa, semuenzaniso kudiridza kana kutengesa mhuka dzinovaraidza, zvemasevhisi, zvigadzirwa zvechipiri, nezvimwe. Asi sei kuisa a ad muChiuru Ads?
Kana iwe uine chimwe chinhu chaunoda kutengesa kana kupa uye unofanirwa kuchishambadza zvakanyanya sezvinobvira, tichakudzidzisa iwe pfungwa nepoint kuti unofanira kuzviita sei.
1 Chii chinonzi Thousand Ads
2 Izvo zvaunofanirwa kufunga nezvazvo kuisa ad
2.1 mifananidzo yemhando yepamusoro
2.2 Musoro wakanaka
2.3 chinyorwa chakanaka
3 Maitiro ekuisa shambadziro muChiuru Ads
Chii chinonzi Thousand Ads
Chiuru Zviziviso, inozivikanwawo seMilanuncios, chaizvoizvo a Classified ads webhusaiti. Kuti uite izvi, zvinokutendera kuti uise zviziviso nevashandisi (vanhu, makambani, freelancers ...) kuitira kutenga, kutengesa, kupa basa kana masevhisi, nezvimwe.
Iyo ine akawanda mapoka ekuisa iyo ad, saka ine yakaringana kuratidzwa kwepamusoro (chokwadi, paSEO level, inowanzoonekwa mumibairo yekutanga yeGoogle).
Waive yakagadzirwa muna 2005 naRicardo Garcia uyo, pasina kana kuita chero chinhu, akakwanisa kuvaka dandemutande mukati make iyo munhu wese akadirana kwairi. Kusvika pakumedza imwe webhusaiti yaive nechinangwa chimwe chete, secondhand .es.
Parizvino, Zviuru zveAds ndiyo webhusaiti yakatsvakwa zvakanyanya kune akaiswa ads paGoogle muSpain.
Izvo zvaunofanirwa kufunga nezvazvo kuisa ad
Nguva zhinji chigadzirwa hachitengeswe kana kusingaonekwe nekuti hauna kunyatsoshandisa peji yacho nemazvo kuchitengesa. Zvichida imhaka yezvinyorwa, nekuda kwemifananidzo (kana kwete mafoto) kana zvimwe zvikonzero. Uye ndizvozvo, kutengesa, unofanirwa kusvika kuvanhu, uye muChiuru Ads hazvina kusiyana.
Saka, kana iwe uchida kuve nekushambadzira muChiuru Ads inoita shanduko uye kuti, mukati memaminitsi mashanu ekuiswa, vanokufonera kana kukutumira mameseji, unofanirwa kuita zvinotevera:
mifananidzo yemhando yepamusoro
Chaizvoizvo haufaniri kuisa imwe. Asi kana ukaaisa, anofanira kunge ari emhando uye, kana zvichibvira, muhuwandu.
Semuenzaniso, kana iwe uchipa puppy, tora mapikicha embwa munzvimbo dzakasiyana uye kubva kwakasiyana maonero. Kana une vabereki vake, itai navo, kuti vagowana pfungwa yezvaachange akaita paanenge akura, uye edza kuti vose vape maonero akanaka embwa.
Chinhu chimwe chete chinoitika muchigadzirwa. Kana uchida kuitengesa unofanira kuifumura kusvika pakakwirira nekuti nenzira iyoyo vanhu vanowana zano rezvauri kutengesa uye kana zvikabata pfungwa dzavo.
Inogona kuva "chipo chembwa". Asi zvakadini kana tikaisa chimwe chinhu chakadai sokuti “Iyi ishamwari isingambokubire kana kukutsamwira? Zvinoshamisa, kunyanya kana iwe ukaisa imwe yembwanana ine chitarisiko chengirozi semufananidzo mukuru.
Musoro wenyaya unoita kuti vanhu vadzvanye pane ad, uye ingori nhanho yekutanga yatinoda kuti uite, kuti uone kushambadza. Nechikonzero ichi, dzimwe nguva haufanirwe kuve wakananga, kunyanya muzvikamu izvo zvinenge zvese ads zvakafanana. Kana iwe uchida kumira kunze, unofanirwa kumira kubva pane zvakajairwa.
Hongu, zvakaoma, asi hazvigoneki. Izvi zvinonzi "copywriting", iyo inonyengetedza kunyora, uye nayo iwe unogona kutengesa chero chinhu.
muchiuru ads Zvinyorwa zvakadai se: xxx chipo chekusakwanisa kumushumira zvinowanda; Ndinotengesa xxx kune xx euros.
Asi nyaya yacho yakadini? Hunhu hwemhuka hwakadii? Ndezvipi zvaunofarira kuita? Chigadzirwa chacho ndechechipiri kana chetatu?
Pane mibvunzo mizhinji yasara isina kupindurwa. Uye izvo zvine dambudziko: izvo vachakunetsa pamibvunzo yese iyoyo uye zvinokwanisika kuti hapana anoda zvaunoshambadza.
Saka, wadii kuisa zvinhu zvose zvaunoda kuziva kubva pakutanga kuitira kuti, kana mumwe munhu achinyatsofarira, anogona kukunyorera kana kukufonera? Iwe hautambisi nguva uye hauitambisire pane vamwe vanhu zvakare.
Tichitevera muenzaniso watanga tichiita. Unopa mboro. Iti kana ari iye wekutanga wemarara, kana ari madzviti, kana ane chero mavara ehunhu, kana akanyanya kupfava kana kupenga, kana anga ave naamai vake nguva yese iyi, kana atodya ega, kana iye. inobaiwa... Zvinhu zvose izvozvo, nezvimwe zvakawanda zvatingafunga nezvazvo, vangangove vatengi vanozobvunza.
Saka usaisa chimwe chinhu chipfupi wotaura kuti chakavapo sei muupenyu. Kanyaya kadiki kanogona kuita sechinhu chisina musoro kwauri, asi uri kutsvaga imba yemhuka iyoyo, kana chigadzirwa. Uye zviri nani kuve nzvimbo yavanoikoshesa chaizvo.
Tsamba, WhatsApp, foni... Ndivo vakajairwa, saka kana uchikwanisa, uye uchida, isa ese ari matatu. Nenzira iyi unowanikwa nyore kuti vakubate.
Zvino zvatava nezvese zviri kuitika, yave nguva yekuti iwe uzive kuisa ad paChiuru Ads. Uye mutengo wayo.
Ngatitange nemutengo. Zvinodhura… zero maeuro. Iwebhusaiti uko kuisa ad hakudhure chinhu. Chimwe chinhu ndechekuti iwe unoda kuitsigira kana kuti iratidze zvakanyanya kupfuura zvemahara, hongu. Asi kana iwe usingade izvo zvekuisa ivo havazokubhadharisi chero chinhu.
Uye ndeapi matanho ekuzviita? Cherechedza:
Iwe unofanirwa kuenda kune iyo yepamutemo peji yemilanuncios.
Kana wangosvika, unofanira kutsvaga bhatani rinoti «buditsa». Iwe unayo zvakare iripo kumusoro kwepeji, bhatani reyero rinoti + Publish.
Sarudza chikamu chaunofunga kuti ad yako inopinda mairi. Ndiko kwaunokwanisa kutora nguva yakati rebei nekuti ine zvakawanda zvekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuwana waunoda.
Chinhu chinotevera chachakubvunza iwe kuisa yako nzvimbo. Pano hazvisi kuda, saka iwe unongofanirwa kutsanangura kubva kune dhorobha kana guta raunoisa ad.
Sarudza kana zvauri kuita kutenga chimwe chinhu (kana kukumbira sevhisi) kana kutengesa (kana kupa masevhisi).
Zadza iyo data uye tinya inotevera. Panguva iyoyo ichakukumbira kuti uwedzere iwo mafoto (iwo esarudzo asi tinodzokorora kuti zviri nyore kuaisa).
Pakupedzisira unoongorora uye woshambadza.
uchava chete mirira kuti vanhu vaone ad yako uye ubate avo vanofarira.
Wona kuti zviri nyore sei kuisa shambadziro paMil Ads?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Maitiro ekuisa shambadziro muChiuru Ads
youtubers vanoita sei mari